CIYAARO | Himilo Media Group
Hargeysa, (Himilo)-Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumeysiga ayaa tababbar casri ah noociisu dalka ku cusub yahay u soo xidhay shaqaale hawleedka Nadaafadda u qaabilsan Xarunta Wasaaradda. Tababbarkan oo ay bixinaysay Shirkadda Adeega Nadaafada ee TOP CLEAN SERVISE, ayaa ujeedadiisu aheyd sidii kor loogu qaadi lahaa Aqoonta iyo Xirfada Shaqaale hawleedka Nadaafada ee Xarunta Wasaaraddaasi oo tiradoodu dhan tahay 17Shaqaale ...
Waxaa cad in tababaraha cusub ee Real Madrid Julen Lopetegui uu Karim Benzema uga dhigan yahay mid ka mid ah furayaasha kooxda, maadaama xiddigaan heerka caalami ahi uu ciyaaray 390 daqiiqo afar kulan oo ay kooxdiisa dhamaan tartamada rasmiga ah ciyaartay. Waxey soo bilaabatay arrintan 15-ka August markii uu xiddiga reer France ciyaaray waqti buuxa kulankii ay guuldarada kala kulmeen Atletico Madrid, ...
Kooxda difaacaneysa tartanka FIFA Club World Cup (Real Madrid) ayaa la ciyaareysa kooxdii soo guuleysata labada kooxood ee Chivas de Guadalajara iyo kooxda ku guuleysata koobka kooxaha qaradda Asia. Tartanka wuxuu ka furmayaa imaaraadka carabta 12-ka December iyadoo kooxda boqortooyada ay si hubanti ah u joogto Semi Final-ka tartanka, waxeyna dooneysaa iney markii 3-aad oo xiriir ah ku guuleysato. Gool uu ...
Hay’adda ugu sarreysa kubadda cagta ee FIFA ayaa ku dhawaaqday magacda ciyaartooyda isugu soo hadhay abaalmarinta xiddiga ugu fiican caalamka (FIFA The Best) isreereeb dheer kaddib. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah Iyo Luka Modric ayaana la soo doortay kuwaas oo helay codadka ugu badan oo ay bixiyeen Ciyaartoyda, Tababarayaasha, Wariyayaasha iyo sidoo kale taageerayaasha kubadda cagta ee fursadda la siiyey. Waa ...
Wararka ka imanaya gudaha dalka England ayaa waxay shaaca ka qaadeen in macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho uu lumiyay qaar badan oo ka mid ah kalsoonida ciyaartoyda Manchester United, kadib sida xun ee ay kaga bilawdeen xili ciyaareedkan. Red Devils ayaa la kulantay 2 guuldaro 3-dii kulan ee ugu horeeyay ee ay ka ciyaareen horyaalka Premier League, kuwaasoo kala ...
Tartanka Kubbada Cagta Adduunka ee ka socda Dalka Ruushka ayaa waxa lagu daah-furay adeeg cusub oo ah mid caawinaya garsoorayaasha ciyaarahani, Adeegan ayaa waxa magaciisa la yidhaa Var waxaana loo soo gaabiyay “Video Assistant Refree”, waxaana macnaheedu yahay Garsooraha Muqaaleed ee Caawiyaha ah. Hadafka loo adeegsaday Adeegani Casriga ah ayaa waxa uu ahaa in muranka iyo khilaafka ay ciyaartooyaga dhexdoodu ...
Tartankii Xisbiyadu wuu dhammaaday, loolankii iyo ololhii wey dhammaadeen, Doorashadii Madaxtooyada waa la galay, Guddiga Doorashooyinka Qarankuna shalay ayey soo saareen natiijadii hordhaca aheyd ee doorashadii Madaxtooyada Somaliland ee dalka ka qabsoontay 13kii bishan Noofambar ee 2017, waxaana ku guuleystay murrashaxiintii Xisbiga Kulmiye ee kala ahaa Madaxweyne Md Muuse Biixi Cabdi iyo Madaxweyne ku xigeen Md Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ...
Jana Novotna oo hore ugu guuleysatay tartanka Tennis-ka ee Wimbledon ayaa geeriyooday iyadoo ay da’deedu ahayd 49 jir. Haweenaydan ayaa u geeriyootay xanuunka Cancer-ka oo ay muddo dheer la tacaalaysay, waxaana sida uu xaqiijiyey xidhiidhka haweenka Tennis-ku ay ku dhex geeriyootay qoyskeeda oo dhinacyo taagan. Novotna oo u dhalatay waddanka Czech ayaa ku guuldarraysatay tartanka Wimbledon sannadihii 1993 iyo 1997 ...
Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa sanku jabay ciyaartii barbar dhaca gool la’aanta ah ku dhamaatay Sabtidii ee Darbi Madrid oo ay kooxdiisu kaga hortagtay naadiga Atletico Madrid. Kooxda haysata horyaalnimada naadiyada Yurub, Ayaan ilaa hadda xaqiijin ama sheegin wakhti cayiman oo laacibkooda difaaca birta ahi uu garoomada dib ugu soo noqon doono. 31 jir Ramos, ayaa waxaa ...
Marka aad tahay wiil uu dhalay ciyaaryahan xidiga aduunyada mar noqday, way fududahay inaad ku fiicnaato shaqada laga qabto goolka hortiisa. Waana sababta wiilka uu dhalay xidigii hore ee naadiga AC Milan afka hore uga ciyaari jiray ee George Weah uu aabihii uga dhaxlay qayb kamid ah xirfadiisii. 17 jirkan ku dhashay magaalada New York, ee heshiiska la saxeexday naadiga ...